Man City Oo Difaacatay Koobka EFL Cupka, Sky Blues Oo Rekoodhayaal Ku Garaacay Chelsea Iyo Khilaafkii Ceebta Ahaa Ee Uu Kepa Ku Bahdilay Maurizio Sarri. – Cadalool.com
Man City Oo Difaacatay Koobka EFL Cupka, Sky Blues Oo Rekoodhayaal Ku Garaacay Chelsea Iyo Khilaafkii Ceebta Ahaa Ee Uu Kepa Ku Bahdilay Maurizio Sarri.
Manchester City ayaa difaacatay koobka EFL Cupka kadib markii ay rekoodhayaal ku garaacay Chelsea isla markaana waxa uu Gaurdiola awooday in uu koobkiisii ugu horeeyay ee xili ciyaareedkan uu Etihad Stadium ka soo dajiyay. Jorginho iyo David Luiz ayaa lumiyay rekoodhayaashii ay tuureen.
Laakiin Leroy Sane ayaa isna Man City rekoodhihii uu u tuuray qasaariyay halka Raheem Sterling uu dhaliyay rekoodhaha ay Man City koobka EFL Cupka ugu difaacatay.
Manchester City iyo Chelsea ayaa barbaro gool la’aan ah ku kala baxay waqtigii rasmiga ahaa ee finalka EFL Cupka waxayna labada kooxood isla gaadheen waqtiga dheeriga ah iyada oo Chelsea qaybtii labaad iska lumisay fursado halis ahaa oo ay goolal ku dhalin kareen.
Laakiin waqtigii dheeriga ahaa ee ciyaarta Man City ayaa heshay laba fursadood oo ay ciyaarta ugu guulaysan kartay balse labada kooxood ayaa markale rekoodhayaal isla gaadhay.
Kaydka: Riyad Mahrez, Arijanet Muric, Ilkay Gundogan, Phil Foden, Danilo, Leroy Sane, Vincent Kompany.
Waxaa kulankan ka soo xaadiray 87,775 kun oo taageerayaal iskugu jiray kooxaha Manchester City iyo Chelsea waxayna abuureen jawi fiican balse ciyaarta ayaa inta badan qaybtii hore ahayd mid aan u qalmin daawashada dadka sidan u badan.
Kaydka: Callum Hudson-Odoi, Willy Caballero, Andreas Christensen, Gonzalo Higuain, Ruben Loftus-Cheek, Mateo Kovacic, Olivier Giroud.
Chelsea ayaa kulankan iskeentay iyada oo wali xaalad xun ugu jirtay kulamadii maxaliga aha ee ay guuldarooyinka waa wayn la soo kulantay waxaana ka mid ahaa kulankii Man City ee Premier league ee ay guuldarada 6-0 ka la soo kulmeen wuxuuna Sarri isku dayay in uu wax ka badalay shaxdiisii kulamadii ugu danbeeyay isaga oo Emerson, Willian iyo Kovacic ku soo wada bilaabay.
Guardiola ayaa isna shax xoogan ku soo galay laakiin qaybtii hore ee ciyaarta ayaa noqotay mid gabi ahaanba ka duwanayd wixii ka dhacay Etihad Stadium kulankii labada kooxood iskugu danbeeyay waxayna Chelea awooday in ay ugu yaraan Man City si buuxda iskaga joojisay.
Man City ayaa aad uga fogayd heerkeedii fiicnaa laakiin David Luiz iyo Antonio Rudiger ayaa shaqo fiican ka qabtay difaaca Blues iyada oo shaqada ugu badan ee ay Chelsea qabtay ahayd in ay difaacasho samaysay halka Eden Hazard aanu helin kubbado ku filan oo uu fursado ku abuuro.
Wax walba oo ay labada kooxood ka sameeyeen qaybti hore ee kulankii Wembley Stadium waxay awoodi waayeen in ay wax goolal ah kala dhaliyaan, waxaana lagu kala nastay barbaro gool la’aan ah.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta labada kooxood ayaa bilaabay in ay raadiyaan fursado ay goolal ku dhaliyaan waxaana markan sare u kacday xamaasada ciyaarta. Lakiin Guardiola ayaa ciyaarta ka saaray Laporte wuxuuna soo galiyay Kompany.
Chelsea ayaa fursado fiican abuurtay iyada oo Eden Hazard uu daqiiqadii 54 aad kubbad halis ah la soo dhex galay xerada ganaaxa Man City laakiin difaaca ayaa ku guulaystay in uu Hazard kaga xoog roonaaday in kubbada laga soo reebay.
Daqiiqadii 54 aad Sergio Aguero ayaa shabaqa Blues ku taabtay kubbad uu meel hal mitir u jirtay goolka Chelsea uu ku helay laakiin xidiga reer Argentina ayaa offside ku jiray wuxuuna garsooruhu ka xaqiijiyay VAR.
Daqiiqadii 66 aad Eden Hazard si bahdilaad ah banaan uga soo dhigtay saaxiibkiisa xulka Belgium ee Kompany wuxuuna Hazard kubbada la soo dhex galay xerada ganaaxa laakiin kubbada uu Kante sida sahlan goolka furitaanka ugu dhalin kari lahaa ayaa wax yar bartilmaameedkeeda seegtay, waxayna ahayd fursad gool cadaan ah loo fishay.
Daqiiqadii 76 aad Eden Hazard ayaa dhulka ugaga soo tagay David Silva halak Otamendi uu dhinaca iskaga dhigay, wuxuuna kubbad dilaa ah u bixiyay Pedro Rodriguez kaas oo go’aan ku gaadhay in halkii uu kubbada goolka si toos ah ugu toogan lahaa in uu kubbada difaaca daba mariyo laakiin kubbada ayay difaacu dirqi iskaga saareen.
Daqiiqadii 79 aad labada tababare ayaa min hal badal sameeyay wuxuuna Guardiola ciyaarta ka saaray David Silva oo ayna habeenkiisii ahayn wuxuuna soo galiyay Ilkay Gundogan halka Sarri uu badalay Pedro wuxuuna ciyaarta soo galiyay da’yarka Hudson-Odoi.
Chelsea ayaa qaybtii labaad ee ciyaarta ahayd kooxda fursadaha ugu badan heshay isla markaana markaasta laga filan karayay in ay goolka ku hormaraan halka Man City ay ahayd mid ku dhibtoonaysay qaabkii ay Hazard ku joojin lahayd.
Daqiiqadii 86 aad Guardiola ayaa ciyaarta ka saaray Kevin De Bruyne wuxuuna badbaado ka dalbaday xidiga saamaynta badan ee Leroy Sané laakiin ciyaarta ayaa gashay waqti wadno xanuun ah oo ay koox kastaaba taxadar muujinaysay.
Daqiiqadii 90 aad Sarri ayaa ciyaarta soo galiyay Loftus-Cheek wuxuuna badalay Ross Barkley waxayna ciyaartu noqotay mid waali ah oo ay koox kastaaba raadinaysya goolka guusha isla markaana ay taxadar ka muujinayeen in gool laga dhaliyo.
Wax walba oo ay labada kooxood iskugu dayeen in ay goolka guusha dhaliyaan waxay ugu danbayn awoodi waayeen in ay shabaqa gaadhaan inkasta oo Chelsea ay lumisay fursado ay waqtigii rasmiga ahayd ugu guulaysan kartay wuxuuna waqtigii rasmiga ahaa ku soo dhamaaday barbaro gool la’aan ah.
15 kii daqiiqo ee qaybtii hore ee waqtigii dheeriga ahaa ayaa ku dhamaaday iyada oo ayna labada kooxood samayn wax la sheegi laakiin Man City ayaa ahayd kooxda ka soo kabsatay dhibaatadii soo haysatay waqtiga dheer iyada oo Sane iyo Gundogan ay wax badan soo kordhiyeen.
DAQIIQADII 110 Sidayna Gool u Noqon!! Man City ayaa heshay fursad aan la rumaysan karin kadib markii uu Raheem Sterling kubbad kala soo xarooday dhinaca midig laakiin Azpilicueta iyo Kepa ayaa awooday in ay Aguero ka beeniyeen gool cadaan ah.
Daqiiqadii 118 aad Rudiger ayaa u qaldamay Aguero wuxuuna markiiba xidiga reer Argentina uu darbo xoogan ku tuuray goolhaye Kepa oo dhaawac soo gaadhay la dhibtoonayay laakiin waxa uu sameeyay badbaadin fiican.
Daqiiqadii 119 aad waqtigii waalida!! Markii uu Kepa xanuun badan dareemayay ayuu Sarri isku diyaariyay in uu goolhaye Caballero ayuu Kepa si aan la rumaysan karin oo bilaa ixtiraam ah uu uga gadooday in ciyaarta laga saaray inkasta oo uu xataa dhaawac dhulka u jiifay waqti isla markaana daawayn loo sameeyay.
Sarri ayaa cadho darteed dharkiisa jeex jeexay isla markaana walxo dhulka la dhacay wuxuuna cadho kula dhacay shaqaalihiisa tababarka oo taageeray in Kepa uu ciyaarta ku sii jiro waxaana si ceeb ah uu Caballero uga soo noqday badalkii uu ciyaarta ku gali lahaa.
Sarri ayaa isku dayay in uu gabi ahaanba garoonka iskaga baxo laakiin dhexda ayuu iska soo rogay wuxuuna awoodi kari waayay in uu cadhadiisa xakamayn karo.
DAREENKA DHACDADA: Arintani waxay cadayn buuxda u noqotay sida aanu Sarri waqti xaadirkan u haysan taageerada ciyaartoyda kooxdiisa iyo waliba shaqalihiisa tababarka wuxuuna noqday mid cidlo taagan oo cadho uu dhiikar ku dhufan gaadhay.
Markale waqtigii dheeriga ahaa ayaa barbaro gool la’aan ah ku dhamaaday waxaana ugu danbayn laysla tagay rekoodhayaal iyada hadal haynta ugu badani noqtay ficilka anshax xumada ahaa ee uu Kepa kula kacay Sarri.
1- Jorginho- Chesea- Qasaariyay
2- Gundogan- Man City-Dhaliyay
3- Azpilicuata- Chelsea-Dhaliyay
4- Aguero- Man City- Dhaliyay
5- Emerson- Chelsea -Dhaliyay
6- Leroy Sane- Man City-Qasaariyay
7- David Luiz -Chelsea- Qasaariyay
8- Bernardo Silva- Man City- Dhaliyay
9- Eden Hazard- Chelsea- Dhaliyay
10- Raheem Sterling- Man City- Dhaliyay rekoodhihii guusha koobka.